नेकपा उठ्नै नसक्नेगरी पतन हुन्छ : डा. बाबुराम भट्टराई - Maxon Khabar
Home / News / नेकपा उठ्नै नसक्नेगरी पतन हुन्छ : डा. बाबुराम भट्टराई
नेकपा उठ्नै नसक्नेगरी पतन हुन्छ : डा. बाबुराम भट्टराई
भुपु प्रम तथा समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पूनः उठ्नै नसक्ने गरी पतन हुने दाबी गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा बसेकाे समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् बैठकमा भट्टराईले आउने उपनिर्वाचन नेकपाको जनमत नाप्ने ब्यारोमिटर समेत भएको बताए।
‘समाजवादी पार्टी निर्माण र आगामी कार्यभार’ शीर्षकको २५ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै डा. भट्टराईले समानुपातिक–समावेशी, सहभागितामूलक तथा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको विरुद्धमा नेकपा विपक्षी दल कांग्रेसकै कित्तामा रहेको बताउँदै अब चाँडै पतन हुने उल्लेख गरे ।
भट्टराईले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यति धेरै नालायकी, भ्रष्टता र अकर्मण्यताका बाबजुद मतपरिणाम नेकपाकै पक्षमा देखिएमा त्यसले निरंकुशता र फाँसीवादलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
त्यो कसैको हितमा हुने छैन।’साथै उनले आफ्नो पार्टी नेपाली राजनीतिमा जरो गाडेजस्तो देखिएका पुँजीवादी र साम्यवादी शक्तिहरुको विकल्पमा समाजवादी लोकतान्त्रिक धारको सवल र सक्षम केन्द्र निर्माण गरी देशलाई साँचो अर्थमा संघीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादको युगमा प्रवेश गराउने संकल्पमा हिँडेको जनाएका छन् ।
तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट अलग्गिएर नयाँ शक्ति निर्माण गरेका भट्टराईले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमसँग २०७६ वैशाख २१ गते एकता गरेर समाजवादी पार्टी गठन गरेपछि पहिलो पटक बिहीबारदेखि परिषद् बैठक बसिरहेको छ।